Teboka vavaka 100 handresena fitsapana sy fahoriana | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Zava-bavaka 100 mba handresena ireo fitsapana sy fahoriana
Zava-bavaka 100 mba handresena ireo fitsapana sy fahoriana
Jakoba 1: 2-3:
2 Ry rahalahiko, raiso ho fifaliana rehetra izany, raha iharan'ny fakam-panahy isan-karazany ianareo; 3 Fantatrao fa ny fizahan-toetra ny finoanao dia mitaky faharetana.
Ny fitsapana sy ny fahoriana dia ampahany amin'ny zavatra iainantsika amin'ny maha-kristiana antsika. Ny mpino tsirairay dia manana ny anjarany amin'ny fitsapana sy ny fahoriana, fa we dia tokony ho matanjaka ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny fahefany. Tsy tokony hitsahatra ny hivavaka isika satria ny vavaka no hany tokana azo antoka handosirana ireo fitsapana fiainana. Rehefa mivavaka isika dia miteraka angovo ara-panahy handresena ireo fitsapana sy fakam-panahy. Androany dia mijery 100 isika teboka amin'ny vavaka handresy ireo fitsapana sy fahoriana amin'ny alàlan'ity vavaka vavaka ity dia hanao ady ara-panahy isika rehefa miady amin'ny alàlan'ny fitsapana manjo ny fiainantsika.
Inona avy ireo fitsapana sy fahoriana? Ireo dia fanamby tonga amin'ny antsika mba hizaha toetra ny finoantsika. Ny devoly dia manararaotra ireo fitsapana ireo mba hanary antsika antsika amin'ny finoana, tadidio ny fanoharana ny mpamafy voa Matio 13: 3-18, ny voa tsara izay latsaka tamin'ny tsilo izay nanana ny teny fa noho ny fitsapana amin'ny endriny miahiahy izao tontolo izao, ilay mpihemotra. Mety tonga ny fitsapana amin'ny endriny samihafa, ireto misy ohatra vitsivitsy:
Ohatra amin'ireo fitsapana sy fahoriana:
1). Fomba malefaka. 1 Samoela 1: 2-22, Genesisy 21: 1
2). Fahantrana. Genesisy 26: 1-6
3). Ny fahafaham-baraka. 1 Tantara 4: 9-10
4). Fahoriana. Ny tantaran'i Joba.
5). Fampahoriana. Daniela 6: 16-23
7). Mahamenatra. Isaia 61: 7
8). Tafa ny fanambadiana
9). Aretina sy aretina
10). Stigma amin'ny fiainanao taloha.
Ny fitsapana sy ny fahoriana dia tsy hita isa, fa miaraka amin'ireo voatanisa etsy ambony, mino aho fa efa manana hevitra momba izay resahantsika. Ity vavaka ity dia manondro ny fandresena ny fitsapana sy ny olana dia ahafahanao mandresy ireo fanamby ireo, rehefa miatrika ireo teboka entim-bavaka ianao dia hitako fa nanova ny tantaranao amin'ny anaran'i Jesôsy Andriamanitra.
Ahoana no fomba hivavahako an'io vavaka atao io?
Mivavaha amin'izy ireo rehefa tarihin'ny Fanahy Masina ianao, na raha afaka manangona azy ireo andro ianao ary hivavaka azy isan'andro. Arosoy koa ianao raha mifady hanina rehefa mivavaka ireo vavaka ireo. Ny fifadian-kanina sy ny vavaka dia mahomby amin'ny fitazonana fifantohana be amin'ny vavaka. Ity vavaka ity dia manondro ny fandresena ny fitsapana sy ny fahoriana dia hiasa ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaha amin'ny finoana anio ary ho afaka mandrakizay.
1. Nambarako fa handresy ireo fitsapana sy fahoriana rehetra eo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
2. Ray ô, miverina amin'ny mpandefa fitaovam-piadiana rehetra izay manohitra ahy amin'ny anaran'i Jesosy aho.
3. Raiko, atolotro anao ny adin'ny fiainako rehetra anio amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Ambarako ny fandringanana tanteraka amin'ny fanelingelenana rehetra ataon'ny devoly amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Aoka ny afon'Andriamanitra hamelatra ny andiany ratsy rehetra hamely ahy sy ny ankohonako amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Tompo ô, amin'ny herin'ny Fanahy Masina, manome hery ahy handresy ireo fitsapana ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ambarako anio fa ny hadisoako taloha dia tsy hametra ny fandrosoako intsony, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Tompo ô, avelao hirotsaka amiko izao ny ranonorana amin'ny tso-dranonao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ry Tompo, avelao ny mekanika rehetra tsy mahomby ataon'ny fahavalo natao hanohitra ny fahombiazako, sorena, amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Mahazo hery avy any ambony aho ary mamelako ny hery rehetra ao amin'ny maizina izay manala ny tso-dranoko amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Hatramin'ny andro androany, dia mampiasa ny fanompoana ataon'ireo anjelin'Andriamanitra aho mba hanokatra amiko ny varavarana rehetra amin'ny fotoana sy vaky, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Nambarako fa tsy ho tafarina intsony amin'ny fiainana intsony aho, handroso amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Tsy hanangana trano honenana hafa aho ary tsy hamboly hafa hohaniko amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Izaho dia manome toky ny herin'ny mpanaparitaka momba ny asako, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Ry Tompo, aoka ny mpamono tsirairay hotendrena hihinana ny vokatry ny asako, voahodina amin'ny afon'Andriamanitra.
16. Ny fahavalo dia tsy hanimba ny fijoroako ho vavolombelona amin'ity vavaka ity, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Nambarako fa ny fiainako ihany no handrosoako amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Izaho dia mahasarotra ny olona matanjaka rehetra mifikitra amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Avelao ho menatra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy ny mpiasa rehetra mahamenatra efa niasa hiasa amin'ny fiainako.
20. Izaho dia manome endrika ny ratsy ny fiainam-pianakaviana mandritra ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Fofonoiko ny afo hafahafa rehetra izay mivoaka avy amin'ny lela ratsy hamelezana ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Tompo ô, omeo hery aho hahavita ny fara tampony amin'ny anaran'i Jesosy
23. Tompo ô, amboary ny fanahin'ny fahendrena aho mba hahatratrarako ny tanjoko.
24. Tompo ô, ampaherezo aho ao anatin'ny olona anaty aho amin'ny herin'ny fanahinao
25. Tsy hanozona ny asa mafy tsy misy tombony amin'ny fiainako manomboka anio sy mandrakizay
26. Ny ozona rehetra momba ny tsy fanatanterahana, tapaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Ny ozona rehetra avy amin'ny fihemorana, vaky, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Mampijaly ny fanahin'ny tsy fankatoavana rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
29. Izaho mandà ny tsy mankato ny feon'Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Ny fakany fikomiana rehetra amin'ny fiainako, izay tompon'andraikitra amin'ny fahoriako dia hongotana, amin'ny anaran'i Jesosy.
31.Mandidy ny loharano hikomy rehetra aho mandritra ny fiainako, maina, amin'ny anaran'i Jesosy.
32. Mandidy ny hery mifanohitra rehetra mandrisika ny fikomiana amin'ny fiainako aho, maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
33. Ny fitaomam-panahy amin'ny ody amin'ny fianakaviako, ho fongotra amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny ran'i Jesosy, esory ny marika ratsy rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
35. Ny fitafiana rehetra apetaka ahy amin'ny ody, potipotina amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Ry anjelin 'Andriamanitra, manomboka manenjika ireo fahavaloko ankohonako, avelao ho maizina sy malama ny lalany, amin' ny anaran 'i Jeso.
37. Tompo ô, afangaro ny fahavaloko rehetra ary ampio azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy
38. Izaho dia tapako ny fifanarahana tsy mety mahatsiaro amin'ny fahavalon'ny ankohonana momba ny fahagagana ataoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Mandidy ny ody ratsy rehetra ao an-trano aho, mianjera ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Tompo ô, ampidiro any amin'ny ranomasina maty ny ratsy rehetra ao an-trano, ka mandevina azy ao amin'ny anaran'i Jesosy
41. Ry Tompo, mandà ny hanaraka ny fomba ratsin'ny fahavalon'ny ankohonako amin'ny anaran'i Jesosy aho
42. Ny fiainako, mitsambikina avy ao an-tokotanin'ny faharatsiana ao an-tokantrano, amin'ny anaran'i Jesosy.
43. Mandidy ny fitahiako rehetra sy ny tanjoko rehetra izay halevin'ny fahavalon'ny ratsy fanahy aho mba hamporisihana azy, amin'ny anaran'i Jesosy.
44. Ho hitako ny hatsaran'ny Tompo any amin'ny tanin'ny velona, ​​amin'ny anaran'i Jesosy.
45. Mandidy ny ratsy rehetra natao tamiko aho hanimba ny hafaliako, handray fandringanana, amin'ny anaran'i Jesosy.
46. ​​Ry Tompo, rehefa nahazo fitia teo imasonao i Nehemia, avelao aho handray ny sitrakao, mba hananako mihoatra ny faritra rehetra amin'ny fiainako.
47. Ry Jesosy Tompo ô, manaova soa amiko amin'ny diako miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy
48. Ry malala, apetraho aho amin'ny alàlan'ny fiantranao tsy an-kiato amin'ny anaran'i Jesosy.
49. Ny fitahiana rehetra nomen'Andriamanitra ahy amin'ny fiainana dia tsy handalo ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
50. Nambarako fa tsy ho nafindra amin'ny mpifanila trano amiko amin'ny anaran'i Jesosy ny fitahiako.
51. Ray Ray ô, manary fahafaham-baraka ny hery rehetra izay manafoana ny fandaharan’asa ho an'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
52. Ambarako anio fa ny dingana rehetra ataoko dia hitondra fahombiazana miavaka amin'ny anaran'i Jesosy.
53. Hahazo hery amin'ny olona sy Andriamanitra amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
54. Ny trano rehetra reraka amin'ny fiainako, potipotika, amin'ny anaran'i Jesosy.
55. Ny tenako, ny fanahiko ary ny fanahiko, mandà ny enta-mavesatra rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
56. Fototry ny ratsy amin'ny fiainako, hanjaviko anao anio, amin'ny anarana mahery Jesosy.
57. Ny aretina rehetra nolovaina tamin'ny fiainako, mandao ahy izao, amin'ny anaran'i Jesosy.
58. Ny rano ratsy rehetra ao amin'ny vatako, mivoaha amin'ny anaran'i Jesosy.
59. Foanana ny vokatry ny fanoloran-tena ratsy rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
60. afo ny Fanahy Masina, ario ny rako amin'ny fanapoizinana satana, amin'ny anaran'i Jesosy.
61. Ry Tompo Ray ô, omeo ahy ny fanahin'ny faharetana amin'ny anaran'i Jesosy.
62. Manda aho fa efa zatra ny aretina ara-pahasalamana, amin'ny anaran'i Jesosy.
63. Ny varavarana rehetra misokatra amin'ny aretina sy ny aretina amin'ny fiainako, dia mihidy tsy tapaka anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
64. Ny hery rehetra mifanditra amin'Andriamanitra amin'ny fiainako, ho fongotra amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
65. Ny hery rehetra manakana ny voninahitr'Andriamanitra tsy hiseho amin'ny fiainako dia ho ringana, amin'ny anaran'i Jesosy.
66. Izaho dia manala ny tenako amin'ny fanahin'ny maina amin'ny anaran'i Jesosy.
67. Andriamanitra anie ho Andriamanitra ao an-tranoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
68. Andriamanitra ho an'Andriamanitra amin'ny fahasalamako, amin'ny anaran'i Jesosy.
69. Andriamanitra ho an'Andriamanitra amin'ny asako, amin'ny anaran'i Jesosy.
70. Andriamanitra ho an'Andriamanitra eo amin'ny toekariko, amin'ny anaran'i Jesosy.
71. Voninahitr'Andriamanitra, valopy isaky ny departemanta ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
72. Ny Tompo Izay mamaly amin'ny afo dia Andriamanitro amin'ny anaran'i Jesosy.
73. Amin'ity fiainana ity, ny fahavaloko rehetra dia hiparitaka mba tsy hitsangana intsony, amin'ny anaran'i Jesosy.
74. Ny ran'i Jesosy, mitalahoa amin'ny fivorian'ny ratsy rehetra nalamina ho ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
75. Ry Raiko Tompo, overeno ny tsy fahombiazako taloha amin'ny fandresena tsy manam-petra, amin'ny anaran'i Jesosy.
76. Ry Jesoa Tompo, manaova efitrano ho fampandrosoana ahy amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako.
77. Ny eritreritra ratsy rehetra manoloana ahy, Tompo ô, ho tsara ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy
78. Ry Ray Tompo ô, omeo ny ratsy fanahy ho avotra amin'ny fiainako izay nanapahan-kevitra hanohitra ahy, tamin'ny anaran'i Jesosy.
79. Tompo ô, ambarao ny firoboroboanao mahasoa ao amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
80. Avelao hianjera amin'ny faritany rehetra amin'ny fiainako ny ranon'ny fanambinana miroborobo.
81. Izaho dia mitaky ny fahombiazako rehetra eto amin'ity fiainana ity amin'ny anaran'i Jesosy.
82. Isaky ny varavaran'ny fahalalako izay nohidiana, sokafana izao, amin'ny anaran'i Jesosy.
83. Tompo ô, ampodio ny fahantrako ho amin'ny fanambinana, amin'ny anaran'i Jesosy.
84. Ry Tompo ô, ampio ny hadisoako ho lasa lavorary, amin'ny anaran'i Jesosy.
85. Ry Tompo ô, ampiharo ny fahatsapako ho tanteraka, amin'ny anaran'i Jesosy.
86. Tompo ô, avoahy ho ahy ny tantely, amin'ny anaran'i Jesosy.
87. Izaho dia manohitra ny fanekena ratsy rehetra avy amin'ny fahafatesana tampoka, amin'ny anaran'i Jesosy.
88. Namotako ny fanekena ratsy rehetra tsy fantatra sy tsy nahatsiaro tena momba ny fahafatesana tsy an-kanavaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
89. Ry fanahin'ny fahafatesana ary ny fasana na afobe, tsy manana ny tananao amin'ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
90. Mandidy ny zana-tsipìka rehetra amin'ny fahafatesana aho, hiala amin'ny lalako, amin'ny anaran'i Jesosy.
91. Tompo ô, ataovy aho ny feon'ny fanafahana sy ny fitahiana amin'ny anaran'i Jesosy
92. Nanitsaka ny fitoerana avo tamin'ny fahavalo aho, tamin'ny anaran'i Jesosy.
93. Mamatotra aho ary manome rahatrizay, ny rà rehetra mamono demony, amin'ny anaran'i Jesosy.
94. Ianao izao fanjakan'ny ratsy izao, mamaha ny aikinao amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
95. Izaho dia manelingelina ny fanapahan-kevitr'ireo misokatra ho an'ny fianakaviako, amin'ny anaran'i Jesosy.
96. Afon'ny fiarovana, mandrakotra ny fianakaviako, amin'ny anaran'i Jesosy.
97. Ray ô, misaotra anao aho fa hihodina amin'ny fijoroako ho vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy ireo fitsapana ireo
98. Misaotra anao Dada nandritra ny androm-piainako, tsy ho menatra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
99. Ray ô, misaotra anao nanala ny endrika rehetra menatra amin'ny anaran'i Jesosy.
100. Ray ô, misaotra anao aho tamin'ny famaliana ny fivavahako
Previous lahatsoratraZava-bavaka 70 eo amin'ny Fototra diso
Next lahatsoratra50 Mivavaka momba ny fiatoana
Thabo Stephen Kingsley Phatlhane March 26, 2021 Ao amin'ny 6: 03 am
Faly be aho afaka manoratra ity mailaka ity. Fa fantatro ihany tamin'ny farany izay loharanon'ny fahasimbako. Nanafika ahy ny devoly sy ny fanapahany ary namoy ny fananako rehetra tety an-tany. Nandehandeha eran'izao tontolo izao ny Fanahiko nitady valiny ary farany dia tafintohina tamin'ny tenin 'Andriamanitra aho tamin'ny alàlan'ny fibabohana sy ny fibebahana. Omaly alina dia namaky vavaka iray momba ny fanahin'ny fanelingelenana sy ny fahatarana aho ary nahatsapa fa ny adiko dia niaraka tamin'ny fanahy hatrany. Nahita ny tenako ho toy ny fanahy maty mandehandeha eny am-pasana aho. Nahita sifotra goavambe tao amin'ny moteran'ny fiarako aho ary tsy nahafantatra ny tandindon'ny fanahy mandroso miadana. Nahita ny tenako voaroba sy nigadra tany amin'ny toeram-piasako taloha aho ary nahita ny tenako nampangain'olona nampijaly olona tao. Nahita ny tenako tao amin'ilay trano very aho taona maro lasa izay ary nanonofy ny toerana hatrany hatrany. Nitranga izany rehetra izany ary tsy fantatro hoe notafihin'ny herin'ny demonia aho. Nahita azy ireo nihomehy ahy aho ary nampijaly ahy. Nahita ny tenako aho nenjehin'ny liona tezitra sy alika tezitra. Tsy nahalala fomba hiadiana aho. Tsy niraharaha ny hiditra amin'ny namako izay nanasa ahy hivavaka aho satria nanana avonavona. Ny vadiko dia voadona niaraka tamiko tao anaty fiara. Nanana lozam-pifamoivoizana maro aho izay nivadika tamiko ilay fiara. Avy eo aho dia nanova ny tenako ho heretika tamin'ny fahatokisana ireo dokotera nentin-drazana fa tsy Andriamanitra. Nianjera nianjera be aho avy eo ary very ny fitarihako amin'Andriamanitra. ireo vavaka nosoratanao sy ny tenin'i Pasitera avy any Trinidad dia naneho ahy ny lesoka tamin'ny fitsarana. Andriamanitra dia nanandrana naneho tamiko fa mila mampita ny tenako amin'ny ady ara-panahy aho. Raha izany, dia efa jamba loatra aho nahita izany. Mangataka anao aho izao mba Hivavaka ho an'ny fanafahana ahy amin'ny tsy fahalalana ary ampio aho hahalala an 'Andriamanitra sy hikatsaka ny fitarihany. Ampio aho hivavaka mba hanafahana amin'ny ratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny Jesosy avy any Nazareta no anontaniako izany. Amena.
Andininy 20 momba ny fahasoavana
Famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 6 Novambra 2018.
Ahoana no fomba hivavahana mandaitra
Vavaky ny fahagagana 20 nanoherana ny fahasarotana
Febroary 8, 2019